‘सरकारलाई घच्घच्याइ रहेका छौँ’ « Pariwartan Khabar
०८ बैशाख २०७६, आइतबार
‘सरकारलाई घच्घच्याइ रहेका छौँ’
१३ मंसिर २०७५,काठमाडौं
साना तथा मझौला उद्यमीहरुको हक हितका लागि आवाज उठाउँदै आएको नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघमा हाल १० हजारभन्दा बढी सदस्यहरु रहेका छन् । जसमा ०४७ सालदेखि स्थापना भएका पूराना साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरु समेत गरी २१ संस्थाहरु गोलबद्ध छन् । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालसँग विभिन्न बिषयमा रहेर परिवर्तन खबरका लागि कुञ्जरमणी भट्टराईले गरेको कुराकानी :
नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघबाट कस्ता कामहरु भइरहेका छन् ?
नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ स्थापना भएको तीन वर्ष पुग्यो । अघिल्लो फागुनमा प्रथम राष्ट्रिय अधिवेशन सम्पन्न गर्यौँ । त्यसपछि हामीले राजनैतिक दलका प्रमुख, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री , अन्य मन्त्रालय तथा विभिन्न निकायमा ज्ञापन पत्र बुझायौँ । तथापी हाम्रा माग सम्वोधन भएका छैनन् । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको मात्रै नभएर हालसम्म व्यवसायीहरुको हक हितका लागि कार्यरत संघ संस्थाहरुले पटक पटक बुझाएका ज्ञापन पत्रको सरकारले सम्वोधन गरेको छैन् । मूलुकमा शान्ति स्थिरता रहेन् । व्यवसायीहरु विभिन्न उतारचढाव, दश वर्षे जनयुद्ध, दैवीप्रकोप लगायतका घटनाहरुसँग जुद्धै लामो समयसँग परिवर्तनका लागि पर्खिए । सरकारमा विभिन्न क्षेत्रबाट पटक पटक ज्ञापन पत्र पनि बुझाइए । तर सरकारले नसुनेपछि त्यसको विकल्पको रुपमा राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको स्थापना भएको हो । महासंघले विभिन्न छातामा रहेका संघहरुलाई एक ढिक्का गर्नेतर्फ लाग्यौँ ।
यहाँहरुको माग चाहीँ कस्ता छन् ?
भन्सारको प्रक्रियालाई सहजीकण गर्ने र त्यसमा व्यवसायीहरुको पहुँच हुनुपर्ने, उद्योगमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने ,साना उद्योगीहरुको र सरकारकाबीच समन्वय हुनुपर्ने, जोसँग कला र सीप छ उसको सम्मान हुनुपर्ने । त्यस्तै दक्ष जनशक्ति तयार गर्नका लागि तालीम केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने, र व्यवसायीको सम्मान स्वरुप बुढेसकालमा थप सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने, सुरक्षको सुनिश्चितता हुनुपर्ने लगायतका माग राखेका छौँ ।
व्यवसायीको माग सम्वोधन हुन नसक्नुका कारणहरु के–के हुन् ?
यसको प्रमुख कारण हो लामो समयदेखि उद्योग व्यवसायमा जरा गाडेर बसेको सिण्डिकेट । यसले गर्दा धेरै विषयहरुमाथी प्रभाव जमाएको छ । मैले त सिण्डिकेटको अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छु । नेपालमा राजनीति परिवर्तन त भयो । देश संघीय प्रणालीमा गयो । तर उद्योग र व्यवसायबीचरहेको सिण्डिकेट चाहीँ राणाकालदेखी नै जकडिएर बसेको छ । यहाँ समस्या के छ भने साना उद्योगी र व्यवसायीहरुका लागि नीति बन्दैन् । नीति त केबल पहुँचवालका निमित्त मात्र बन्ने गरेका छन् । मूलुक आयातमूखी बन्न पुग्नुको कारण नै आफूलाई पाच्य हुने नीति बनेर त हो । जबसम्म सरकार साना उद्योगी व्यवसायीको समस्या सुन्दैन तबसम्म मूलुक आयातमूखी बन्ने र युवाहरु विदेश पलायन हुने क्रम जारी नै रहन्छ । देशमा रोजगारीको प्रचुर भण्डार हुँदा हुँदै पनि झनै सहुलियत रुपमा युवाहरु विदेश पठाइरहेका छौँ ।
लागू नै नहुने मागसहितका ज्ञापन पत्र बुझाई रहनुको आवश्कता चाँही किन ?
हामीले भनेका सबै मागहरु सहजै सम्वोधन हुन्छन् भन्ने छैन् । सरकारलाई हाम्रा समस्याहरुसहित मागहरुबारे घचघच्याइ रहने काम हाम्रो हो । सम्वोधन गर्ने नगर्ने सरकारकै हातमा छ । हाम्रो दायित्व भनेको हाम्रा यस्ता समस्या छन् भनेर जानकारी दिने हो । कुनै न कुनै सरकारबाट त यी मागहरु सम्वोधन होलान भन्ने पखाईमा छौँ । ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदा तपाईहरुले जे निर्णय गरेर आउनुभएको छ त्यसमा सत प्रतिशत सरकारको साथ रहन्छ भन्दै ढुक्कसँग बस्न आग्रह गर्नुुभएको छ । तर, त्यो आश्वासनले संघ ढुक्क भई बस्ने सक्ने अवस्था छैन ।
महासंघबाट भएका अन्य कामहरु ?
सरकारको मुख ताक्ने भन्दा पनि हामी आफ्नै बलबुतामा काम गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ । हाम्रो पहिलो काम भनेको सातैवटा प्रदेशमा हाम्रो लगानीमा औद्यौगिक क्षेत्र करिडोर बनाउने । हामीसँग केही गर्छु भन्दा पनि कुनै पनि बैंकले ऋण दिनका लागि नमान्ने दशौँ हजार व्यवसायिको झुण्ड छ । हामी आत्मनिर्भर बन्नका लागि तालीम केन्द्र स्थापनाको लक्ष्य लिएका छौँ । सरकारले औदोगीक ग्राम, विशेष औद्योगीक क्षेत्र बनाउने योजना ल्याएको छ तर त्यहाँ सबैको पहुँच पुग्दैन् । त्यसमा पनि सिण्डिकेटवालाहरु नै पुग्ने हुन् । दुई तिहाइरको सरकार आएपनि खासै परिवर्तन भएको देखिँदैन् ।
करको विषयमा यहाँको धारणा……..?
अत्याधिक रुपमा बढाइएको करले साना व्यवसायीलाई झनै अप्ठ्यारोमा पारेको छ । यो करले साना उद्योगीलाई सडकमै लैजान आँटेको छ । कर रहले तिर्न पाउनुपर्दछ । त्यसो भन्दै गर्दा कर तिर्नु हुन्न भन्ने हैन् । देश सम्बृद्ध बन्नका लागि हामीले कर तिर्नैपर्छ । हामीले सबै व्यवसायीलाई कर तिर्न आग्रह गरिरहेका छौँ । कर तिर्नका लागि राज्यले स्वच्छ वातावरण बनाउनुपर्दछ ।
महासंघको भावी योजनाहरु कस्ता छन् ?
लामो समय विभिन्न समस्याको सामना गर्दै आयौँ । अहिलेको दुई तिहाईको सरकारसँग पनि धेरै आशाा राख्यौँ । तर केहि परिवर्तन नदेखिएपछि हामी पहिले जसैगरी कसरी एकिकृत हुनसक्छौँ , हामीले जीवीको पार्जन कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा विभिन्न योजनाहरु ल्याएका छौँ । सरकारकै मुख नताकीकन आफैँ भन्सारसम्म जाने वातावरण बनाउने , कच्चा पदार्थको हकमा यहीँ अनुसान्धन गर्ने कामकोे सुरुवात पनि गरिसकेका छौँ । व्यवसायी र उद्योगीबीचको भाइचारालाई अझै मजबुत बनाउने काममा जुटिरहेका छौँ । लामो समयदेखि स्थापना भएका महासंघहरुले एक ठाउँमा ल्याउन नसकेको २१ वटा संघ एकै ठाउँमा ल्यायौँ । ४७ सालदेखि स्थापना भएका व्यवसायीहरुलाई एकै ठाउँमा मिलाउने काम त्यति सहज थिएन् ।
०८ बैशाख २०७५, काठमाडौं काठमाडौं जिल्ला बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ९ धोबीखोला करिडोर (साविक चपली
फिल्म क्षेत्रमा काण्डमय २०७५ :अभिनेत्री केकी अधिकारीलाई चोरीको आरोप !!
ढुक्क हुनुस्, पार्टी एकता भोली हुन्छ : अध्यक्ष दाहाल (भिडियो सहित)
निर्देशक सुर्वण थापाको ‘राम राम’ मा सौगात अनुबन्ध !